Argyle Social: Ntughari mgbanwe na Social Media | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 14, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Ruo nwa oge, enyi na otu Jason Falls anọwo na-emekọrịta ihe ma na-egosipụta ikike nke Argyle Social. Jay Baer bụkwa onye ofufe. Anyị na-eji ọtụtụ ngwaọrụ na ọbụlagodi nke anyị elekọta mmadụ mgbasa ozi gị n'ụlọnga ọrụ. Ọ bụ ihe dị mma n'elu ikpo okwu ma ịnye ọnụahịa bụ akụ.
Jason mere ka ndi mmadu mara ya na Argyle ma ha gosiputara anyi ihe ikpo okwu. Ọ masịrị m nke ukwuu. Ọbụghị naanị na ọ bụ ezigbo oge na dashboard siri ike maka na-elekọta mmadụ ebipụta, aka ndi ahia, na nchịkọta mmadụDrop nkwụsị ihu na-abịa mgbe ndị otu gosipụtara ikike iji soro ntụgharị na sistemụ ahụ. Nke a bụ ogbugbe nke mkpokọta na-akuko na mgbanwe na ego dollar (ịtọ ntọala dollar dị nhọrọ).
Comprehensive akuko na-enye mgbanwe mgbasa ozi site na isi iyi mgbasa ozi:
Na a n'ezie oyi mma nke nsụgharị ntụgharị na mmetụta site na akaụntụ:
Argyle na-ejikọta na Google Analytics, na-akpado njikọ gị na GA parameters na-akpaghị aka ka ị nwee ike nyochaa mkpọsa na Google. Nke a dị mkpa, ebe ọ bụ na a na-esonye ọtụtụ okporo ụzọ na-aga n'ihu na okporo ụzọ 'kwụ ọtọ' ka ị na-eleba anya n'okporo ụzọ okporo ụzọ na nchịkọta gị. Edere m banyere otu esi eme ya nyocha mgbasa ozi ọha na eze bụ ihe na-efu na nchịkọta n'ụzọ zuru ezu.
Ọkt 14, 2011 na 10:46 AM
Daalụ maka post, Douglas! Nnọọ obi ụtọ na-agụ na anyị mere ka agba gị daa. 🙂
Onye isi, Argyle Social
Ọkt 14, 2011 na 8:05 PM
Daalụ Douglas maka okwu ọma ahụ.